Kudeta - Anosy : Fohy nefa nampilendalenda ny seho nataon-dry Njava -
AccueilVaovao SamihafaKudeta – Anosy : Fohy nefa nampilendalenda ny seho nataon-dry Njava
Kudeta – Anosy : Fohy nefa nampilendalenda ny seho nataon-dry Njava
Nafana ny fifankahitana. Fohy nefa nampilendalenda ny seho natolotry ny tarika Njava ny alakamisy alina teo tetsy amin’ny Kudeta Anosy. Teo amin’ny ora iray teo ny naharetan’ny fampisehoana raha mahazatra antsika eto an-toerana ny fiarahana mandra-maraina amin’ny seho takariva toa izao. Ora iray nankafizana ny feo mangan’i Monika sy Lala, ary noravahan’ireo zava-maneno notendren-dry Dozzi, Pata, Maximin ary Miary Lepiera. Ireto mpitendry izay nisy ampaham-potoana nanehoan’izy ireo ny talentany. Tsikaritra ihany koa anefa ny fifaninanana anatiny teo amin’i Monika sy Lala amin’ny fanehoana feo manga, indrindra ireo fomba fihira avy any amin’ny faritra Androy iny.
Saika vahiny ny ankamaroan’ireo mpijery tonga tamin’ny fampisehoana, nefa tazana teny an-toerana ihany koa ireo teratany mpankafy ny sangan’asan’ny tarika, indrindra ny avy any Toliara. Nanakoako tetsy amin’ny Kudeta ireo hira nahafantarana ny tarika toa ny « Androy », « Voatse », « Jiboty », « Raniny »… Anisan’ny tsiro hafa tao anatin’ny seho ny nanoloran’ny tarika Njava hira ho an’ilay mpanakanto Mamy Gotso, tonga teny an-toerana, ary nankalaza ny tsingerintaona nahaterahany.
Mpanakanto maromaro no tonga nijery sy nanotrona ny tarika Njava tamin’ity seho ity, toa an-dry René Fulgence (mpanao horonan-tsarimihetsika), Mija, Matsubara…
Fanadinana CEPE : Tanterahina amin’ny 14 aogositra ho avy izao
Efa voatonta avokoa ny laza adina hiatrehana ny fanadinam-panjakana CEPE izay atao ny 14 aogositra ho avy izao. Efa miroso amin’ny fanapariahana ireo laza adina any amin’ny Dren amin’ny faritra rehetra manerana ny Nosy araka ...Tohiny